Fandefasana an'i Costa Rica
Costa Rica dia iray amin'ireo fanjakana kely indrindra any Amerika Afovoany. Ny dikanteny avy amin'ny teny Espaniola, ny anaran'ny firenena dia midika hoe "amoron-dranomasina manankarena", izay azo hamarinina tsara, satria eto ny zavatra tsara indrindra dia angonina amin'ny fomba mahagaga: zaridaina , tora-pasika , tantara ara-tantara sy kolontsaina, tranombakoka, sns. Mba hahafahanao mifankazatra amin'ireo fomba mahaliana indrindra amin'ity paradisa ity, tokony ho fantatrao aloha ny tenanao amin'ny sombim-panaon'ny hetsika manerana ny firenena. Ny karazana fitaterana lehibe indrindra any Costa Rica dia horesahina amin'ny antsipiriany bebe kokoa.
Tsy isalasalana, ny karazana fitateram-bahoaka ao Costa Rica no bisy. Ity dia safidy teti-bola tsotra (ny saran-dalana dia $ 0.5), fa tsy ny ratsy indrindra. Efa vaovao daholo ny fiara fitaterana rehetra, ao anaty trano fivoahana ny rivotra.
Amin'ity karazana fitaterana ity dia afaka mifindra eo amin'ireo tanàn-dehibe ( San Jose , Limon , Puntarenas , Heredia ), ary eo anelanelan'ny tanàna kely ( Puerto Viejo de Talamanca , La Fortuna ). Mivezivezy matetika matetika ireo fiara fitateram-bahoaka any Costa Rica, izay ahafahan'izy ireo mivezivezy ao anatin'ny fotoana fohy.
Taxi sy fiofana fiara
Mazava ho azy, ny safidy tsara indrindra ho an'ny fandehanana manerana ny firenena dia fiara nohofana. Mba hanofana fiara iray, tokony ho 21 taona mahery ianao, hitondra fahazoan-dàlana iraisam-pirenena sy pasipaoro iraisam-pirenena. Ankoatr'izay, ny fandanjalanjana ny salan'isa amin'ny banky dia tokony ho $ 1000 farafaharatsiny.
Raha ny saran'ny serivisy, dia miankina amin'ny kilasy amin'ny fiara sy ny vanim-potoana. Noho izany, ohatra, ny tampon'ny "mpizahatany mpizahatany" any Costa Rica dia mianjera amin'ny vanin-taona ririnina, rehefa tonga ny "Taom-baovao sy ny fety Krismasy" miaraka amin'ny "vanim-potoana maina". Amin'ny andro toy izany, afaka manofa fiara ho an'ny $ 40-150 isan'andro ianao. Amin'ny fotoana hafa amin'ny taona, ny vidiny dia iray sy sasany ary roa heny isa.
Ny taxi any Costa Rica dia malaza amin'ny mpandeha sy ny mponina. Tena mora ny mijery ny fiara: ny fiara tsirairay dia voasarona amin'ny loko marevaka mena. Ny fandanian'io serivisy io dia kely, raha toa ka mikasa ny handresy lavitra lavitra ianao, tsara kokoa ny manaiky ny mpamily mialoha ny vola farany, raha tsy izany dia mety handoa vola indroa ianao.
Fiaramanidina sy fiarabe fitaterana
Na dia heverina ho fanjakana madinika aza i Costa Rica, dia anisan'ny fiaramanidina malaza indrindra ny fiaramanidina malaza indrindra. Ity tolotra ity dia manan-danja mandritra ny vanim-potoanan'ny orana (ny vanim-potoana hatramin'ny volana May ka hatramin'ny Oktobra), raha mihen-dàlana ny làlana rehetra ary ny làlana fandehanana an-dalamby dia hany fomba azo itodihana ny firenena. Etsy ankilany, misy seranam-piaramanidina iraisam-pirenena sy seranam-piaramanidina maherin'ny 100, ary ny fifamoivoizana rehetra dia tanterahan'ny SANSA.
Miaraka amin'ny fiaramanidina dia manjary ratsy kokoa ny toe-draharaha: ny serivisy sasantsasany ihany no mifandray amin'ny lalamby. Amin'ny hoavy, ny famerenana tanteraka ity fomba fitaterana ity dia nomanina, ary amin'izao fotoana izao dia misy toerana vitsivitsy ihany sisa ho an'ny mpizaha tany: San Jose - Caldera, San Jose - San Pedro sy San Jose - Pavas.
Alohan'ny handehananao mandeha dia vakio ny fitsipika sy lalàna ambaran'ny lalàna any Costa Rica :
Any amin'ny faritry ny fanjakana, ny fifamoivoizana ankavanana.
Ireo endri-tsoratra rehetra dia amin'ny teny Espaniôla, noho izany dia tokony hianatra ny teny sy ny fehezan-teny an-dalam-pandrosoany ianao, ary koa mahazo rakibolana espaniola-Rosiana raha ny marina.
Miaraka amin'ny fanofana fiara, dia ilaina ny fiantohana. Etsy ankilany, ny vidin'ny solika dia tsy tafiditra ao amin'ny trano fisakafoanana, fa hamerina ny vidin'ny fiara amin'ny tank feno.
Ho an'ny fitsangatsangana ivelan'ny tanàna dia tsara kokoa ny maka SUV.
Ireo zoro any Costa Rica
Barbados - zava-misy mahaliana
Panama - manofa fiara
Ahoana no hanomezana sakafo ireo lisy eny amin'ny lohataona?
Tsy hiseho amin'ny sehatra mahatsikaiky intsony i Megan Fox
Ny molotra Cheshutsya - famantarana
Fahalalahana ny olona
Ahoana no hahafantarana ny andro fialantsasatra?
50 sarin'ireo biby izay mila jerena fotsiny
Inona no tokony hojerena amin'ny fiara ao Crimea?
Alycha - sakafo ho an'ny ririnina
Mamboatra ny efitrano fandraisam-bahiny amin'ny tanany manokana
Ahoana no hikapohana ny jaky rehefa avy sasana?
Ny fanomezam-boninahitra an-trano ho an'ny renibeny